ब्रम्हाण्डमा कति तारा छन् ? पत्ता लागिसक्यो - StarPratika.com
काठमाडौं । जब तपार्इँ हामी रातमा आकाशमा झिलमिल तारा देख्छौँ, तब हाम्रो मनमा एउटा जिज्ञासा सधै उठिरहन्छ : आखिर ब्रम्हाण्डमा कति तारा होलान् ? हुनत गीत तथा साहित्यमा नौलाख तारा भन्ने गरिएको छ । तर ब्रम्हाण्डमा त्यो भन्दा कैयन् गुणा धेरै तारा भएको वैज्ञानिकहरुले बताउँदै आएका छन् ।
वैज्ञानिकहरुका अनुसार पृथ्वीमा जति समुद्री तट छन् र त्यसमा बालुवाका कण छन्, त्यति नै संख्यामा ब्रम्हाण्डमा तारा छन् ।
अमेरिकी खगोलविद् कार्ल सगनले पछिल्लोपटक यस्तो दाबी गरेका छन् । एक टेलिभिजन शोमा उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
तर के उनको दाबी सही हो त ? के ब्रम्हाण्डमा रहेका ताराको गणना सम्भव छ त ?
क्याम्बि्रज विश्वविद्यालयका खगोलविद प्राध्यापक गेरी गिरमोरले आकाशगंगामा रहेका ताराहरुको गणना गरिरहेका छन् । आकाशगंगामै हाम्रो सौर्यमण्डल रहेको छ । उनले एउटा परियोजनाको अगुवाई गरिरहेका छन् जसले युरोपेली अन्तरीक्ष यानका माध्यमबाट आकाशगंगामा रहेका ताराको गणना गर्दैछ ।
आकाशगंगामा २० हजार करोड ताराहरु
प्राध्यापक गेरीले बीबीसीसँग भनेका छन्, ‘दूरीको हिसाबले हाम्रो टोलीले यसअघि पहिलोपटक करीब २ अर्ब ताराको तथ्यांक पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको थियो । तर यो संख्या आकाशगंगामा रहेका कूल ताराहरुको एक प्रतिशत मात्र हो ।’
गणनाको यस मोडेल अनुसार आकाशगंगामा करीब २० हजार करोड तारा हुनसक्छन् ।
तर यो केवल एउटा आकाशगंगाको मात्र तथ्यांक हो ।
पूरै ब्रम्हाण्डमा कति तारा होलान् त त्यसोभए ?
प्राध्यापक गेरी गिरमोरका अनुसार अन्य आकाशगंगामा पनि हाम्रै आकाशगंगामा जति नै तारा हुनसक्छन् । यदि ब्रम्हाण्डमा कति आकाशगंगा छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकियो भने कूल ताराको संख्या अनुमान गर्न सकिन्छ ।
१० हजार करोड आकाशगंगा
ब्रम्हाण्डमा आकाशगंगाको संख्या पत्ता लगाउनुअघि यो पत्ता लगाउनुपर्छ कि त्यो कति चम्किलो छ ? के अरु सबै आकाशगंगा हाम्रै आकाशगंगा सरह छन् वा फरक छन् ?
गिरमोरका अनुसार त्यो पत्ता लगाउनका लागि आकाशगंगाको दूरी तथा आकार पत्ता लगाउनुपर्ने हुन्छ । यसबाट हामी यो समझदारी बनाउन सक्दछौँ कि ब्रम्हाण्डको विस्तार भैरहेको छ । यसलाई हबलको सिद्धान्त भनिन्छ ।
हबलको सिद्धान्त अनुसार गिरमोरले आकाशगंगाको चमक र पृथ्वीबाट दूरीको बारेमा पत्ता लगाउने कोसिस गर्दैछन् । वैज्ञानिकहरुको एउटा दाबी अनुसार ब्रम्हाण्डमा १० हजार करोड आकाशगंगा छन् र हरेक आकाशगंगामा औसतमा करीब २० हजार करोड तारा छन् ।
यस हिसाबले ब्रम्हाण्डमा रहेका कूल ताराको गणना गर्न सकिन्छ ।
यदि त्यस्तो गणना गर्ने हो भने ब्रम्हाण्डमा रहेका ताराको संख्या दुई पछाडि २२ वटा शून्ना बराबरको संख्यामा अर्थात् २ सय अर्ब खर्ब हुनेछ ।
बालुवाका कण कति ?
पृथ्वीमा रहेका समुद्री तटमा रहेका बालुवाका कण बराबर ब्रम्हाण्डमा तारा रहेको दाबी गर्नेहो भने बालुवाका कण कति छन त ?
यो पत्ता लगाउनका लागि समुद्री तटको संख्या र घनत्व कति छ ? त्यो पत्ता लगाउनुपर्ने हुन्छ । तटको लम्बाइ, चौडाइ तथा गहिराइको मापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ओपन स्टि्रट म्याप यस्तो परियोजना हो जसमा विश्वका करीब २० लाख मानिसले डाटा शेयर गर्दछन् । अमेरिका, बेलायत, क्यानडाका सरकारले समेत यसमा आफ्ना डाटा शेयर गर्ने गरेका छन् ।
पानी तथा यसको व्यवस्थापन गर्ने संस्था डेल्टर्सका शोधकर्ता जेनेडी डोनचेट्सका अनुसार ओपन स्ट्रिट म्यापको तथ्यांकको हिसाबले एउटा समुद्री तट औसतमा १.९ किलोमिटर लामो हुन्छ । पृथ्वीमा बालुवायुक्त समुद्री तटको लम्बाई करीब ३ लाख किलोमिटर छ ।
अब यसको घनत्व पत्ता लगाउनुपर्ने हुन्छ । औषतमा समुद्री तटको चौडाइ ५० मिटर तथा गहिराइ २५ मिटर छ । यसलाई गुणा आयतन निकाल्दा समुद्री तटको कूल आयात ३७ हजार ५ सय करोड घनमिटर हुन आउँदछ ।
एक हिसाब अनुसार एक घनमिटर बालुवामा एक हजार करोड कण हुन्छन् । यस प्रकारले ३७ हजार ५ सय करोडलाई १ हजार करोडले गुणा गर्ने हो भने पृथ्वीमा समुद्री तटमा रहेका बालुवाको कणको संख्या पत्ता लगाउन सकिन्छ । यसरी हिसाब गर्दा बालुवाको कणको संख्या ३.७५ को पछाडि २१ वटा शून्ना, अर्थात् ३७ अर्ब ५० करोड खर्ब हुन आउँदछ ।
अतः माथिको तथ्यांकबाट पनि के थाहा हुन्छ भने समुद्री तटमा रहेका पूरै बालुवाको कणभन्दा पनि धेरै संख्यामा ब्रम्हाण्डमा तारा रहेका छन् ।
प्रकाशित मिति : 2018-07-28
फिल्मीखबर साप्ताहिकर्को व्यक्ति सम्मान र चलचित्र पत्रकारिता पुरस्कार, जीतु र रिनाशालाई
ट्यालेन्ट शोमा मिस एभिएसन क्विनका प्रतिस्पर्धिहरु
स्व. राजा वीरेन्द्रको ७४औं जन्मजयन्ती अवसरमा शाही युवा शक्ति नेपालको मोटरसाइकल र्याली
दाइ नभन्नु ल,कि पुर्णिमा चर्चामा
सचिन राईको“मापसे ” हेर्नुहोस भिडियो
जातिय कुरीति र कुसंस्कार बिरुद्द लड्न तयार छौं – मोडल सुजना बर्देवा
असार १ गतेबाट पठनपाठन सुरु गर्न शिक्षामन्त्रीको आह्वान
अमेरिकामा नक्षत्र फाउन्डेसनको प्रस्तुतिमा सुरु भयो , ज्युनियर अनलाईन डान्स प्रतियोगिता
भ्वाइस अफ नेपालका विनय कार्कीको ‘तिम्रो मेरो मेरो माया’ सार्वजनिक
Categories Select Category main (1,332) Model (191) अन्तवार्ता (32) हाम्रो स्टार टिभी (2) खेलकुद (83) गसिप (38) गीत / संगीत (1,686) फिल्मी खवर (601) बलिउड । हलिउड (117) राजनीति (266) समाचार (2,748) सस्कृति (79) स्वास्थ्य खवर (81)